वसन्त चाड विदेश घुम्ने ६५ लाख चिनियाँमध्ये कति जालान् नेपालमा? - China Radio International
वसन्त चाड विदेश घुम्ने ६५ लाख चिनियाँमध्ये कति जालान् नेपालमा?
(GMT+08:00) 2018-02-14 10:17:11
चिनियाँ परम्परागत पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष वा वसन्त चाड आइपुग्यो। एक हप्ता लामो विदा मनाउनका लागि चिनियाँहरू झिटीगुण्टा तयार पारेर, देशभित्र वा देशबाहिरको यात्राका लागि टिकट काटेर ठिक्क परेका छन्।
फेब्रुअरी १५ देखि २१ सम्म चिनियाँहरूको चाडवाड मनाउने अवधि बनेको छ। अरू पर्वभन्दा यो नै लामो विदाको पर्व भएकाले विदेश भ्रमणको एउटा राम्रो अवसर पनि हो। श्रम संगठनको नियम मुताविक चिनियाँहरू कार्यालयका दिनहरूमा ८ घण्टा डटेर अनुशासनपूर्वक काम गर्छन्।
चीनको नेशनल टुरिजम एड्मिनिस्ट्रेशनले जनाएअनुसार सन् २०१७ मा चीनकै आन्तरिक पर्यटन गर्ने चिनियाँ र विदेशीको संख्या १३९ मिलियन थियो जब कि सन् २०१६ मा १३८ मिलियन। चीन भित्रिएका विदेशीहरूको उपस्थितिले आन्तरिक पर्यटन पनि विस्तार भैरहेको छ। चाइना टुरिजम एकेडेमीका अध्यक्ष ताइ पिनका अनुसार चीनको समृद्धशाली पर्यटकीय गन्तव्यले पर्यटन उद्योग धेरै उत्साहित छ। सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्र अझै सुधारोन्मुख हुने अपेक्षा छ। यस वर्ष आन्तरिक पर्यटन अझै बढ्ने र संख्याका हिसाबले १४० मिलियन पुग्ने अपेक्षा छ।
सन् २०१७ मा चीनको पर्यटन आम्दानी ५.४ ट्रिलियन युआन पुगेको थियो। अन्य सम्बन्धित पर्यटन उद्योगहरूको आम्दानी जोड्दा ९ ट्रिलियन युआन पुगेर चिनियाँ जीडीपीमा ११ प्रतिशतको योगदान गरेको थियो। नेश्नल टुरिजम एड्मिनिस्ट्रसनका उपप्रमुख वाङ स्याउफङले सन् २०१८ भरि ८३ प्रतिशतले आन्तरिक पर्यटन गर्ने प्रक्षेपण गरे।
उनका अनुसार यसपालि वसन्त चाड अवधिमा चीनभित्रको पर्यटन बजारमा ३८ करोड ५० लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढ्नेछ। साथै देशभित्रको पर्यटन आम्दानी चार खर्ब छ्यहत्तर अर्ब चिनियाँ युआन पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
चीनको आन्तरिक मात्रै हैन, बाहिरी मुलुकका मुख्य पर्यटकीय आयश्रोत पनि चिनियाँहरू नै हुन्। यसपालिको वसन्त चाडको अवधिमा मात्रै ६५ लाख चिनियाँले संसार यात्रा गर्दैछन्। चीनका २ सय शहरका पर्यटकहरूले संसारका ६८ मुलुकका ७०० वटा शहर घुम्नका लागि बुकिङ गरेका छन्। त्यसैले हरेक देशले चिनियाँ पर्यटक तान्न भरमग्दूर सहुलियत र पर्यटकीय विकासका परियोजनाहरु चलाएका छन्। अब हेरौं, नेपालको भागमा कति पर्यटक पर्नेछन्।
युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, सामुद्रिक मुलुकहरू लगायतले अनेकन सुहलियतका कार्यक्रम संचालन गरेका छन्। चिनियाँका लागि अधिकतर लचकता अपनाउने विषयमा अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच पनि होडबाजी देखिन्छ। पर्यटक भित्र्याउन हरेक देशले आ–आफ्नै तयारी गरेपनि नजीकको छिमेकीको नाताले नेपालले के तयारी गरिरहेको छ? चिनियाँ नयाँ वर्षको विदा र नेपालमा वसन्त ऋतुको आगमन लगभग उस्तै समयमा परेकाले भ्रमणका लागि निकै उपयुक्त समय हो।
अब कुरा आउँछ, नेपालले पूर्ण तयारी गरेको छ? यात्रा सरल र सहज बनाउन, स्वस्थ र रोमान्टिक बनाउन, खानपान, किनमेल र पारिवारिक जमघटयुक्त बनाउन पर्याप्त पूर्वाधार छ? चिनियाँले उपभोग गर्ने सागसब्जी, मासुका परिकार, स्वास्थ्य वा सौन्दर्य, हस्तकलाका सामग्रीहरू उपलब्ध छन्? इन्टरनेटबाट भन्नेविक्तिकै किन्न सकिन्छ कि? चिनियाँ अनुकुलका रेष्टुरेन्टहरू तयारी हालतमा छन्? चिनियाँहरूले अलिबाबा, थाउपाउ, जेडी डट कम जस्तै ई–कमर्स साइटहरू के के छन्। नेपालका कुन कुन क्षेत्रको मौसम कस्तो छ भनेर हेर्ने विश्वसनीय प्रचलित नेपाली मैसम एप के छ? अन्य नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य के थपिएका छन् वा पूर्वाधारहरू चुस्तदुरूस्त के कस्ता छन्?
संसारका पर्यटकीय गन्तव्यहरूले पोहोर, परारका अनुभवबाट सिकेर यस वर्ष नयाँ नयाँ पर्यटकमैत्री चिनियाँ लक्षित योजना अघि सारेका छन्। शान्ति सुरक्षा र पर्यटकका लागि झन्झट रहित मुलुकहरूले यो अवसरलाई गुमाउन पनि चाहँदैनन्। पर्यटकीय सिजनको यो शिखर समय खेर फाल्नु भनेको कुनै किसानले असारमा मानो रोप्न भुले जस्तै हो जसबाट मुरी फलाउने सपनामाथि आघात पर्नेछ।